တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး နှင့် တွေ့ဆုံ ၊ အာရှအသံများကို ပိုမိုနားထောင်ရန် ကမ္ဘာကို တောင်းဆို - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ကမ္ဘောဒီးယား ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn နှင့် မေ ၈ ရက်တွင် ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် တွေ့ဆုံစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၊ မေ ၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ နိုင်ငံတော် ကောင်စီဝင် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုသည် အာရှအချိန်အခါသမယသို့ ဝင်ရောက်လာသည့်နှင့်အမျှ အာရှအသံများကို ပို၍ နားထောင်ရန် မေ ၈ ရက်တွင် ကမ္ဘာကြီးအား တိုက်တွန်းတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက ကမ္ဘောဒီးယား ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn နှင့် ရုပ်သံလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်စဉ်အတွင်း ထိုသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကာ ဝမ်ရိက လူသားများအတွက် ကံကြမ္မာအကျိုးတူအသိုက်အဝန်းတစ်ခု တည်ဆောက်ရန် အမြင်နှင့်အတူ ပိုမိုတရားမျှတပြီး သာတူညီမျှဖြစ်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်အား တည်ဆောက်ရန် တရုတ်ဘက်က ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆိုပြုချက် နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဆိုပြုချက်အား အဆိုပြုခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်း အဆိုပြုချက်နှစ်ရပ်အား အကောင်အထည်ဖော်ရန် နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး ၊ ချမ်းသာကြွယ်ဝရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ)နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် အဆင်သင့်ရှိကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
လာမည့်လတွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် BRICS ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အရှေ့အာရှခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ၊ G20 ခေါင်းဆောင်များ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွါးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (APEC) စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေးတို့အား ဆက်တိုက်လက်ခံကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။ အာရှကို ယင်းကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးဆောင်သည့်အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှု နှင့် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက မျှော်လင့်ကြသည့်အတွက်ကြောင့် ယင်းမှာ အာရှအချိန်အခါသမယ ဖြစ်ကြောင်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်ရေးသာမက နိုင်ငံစုံပါဝင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရေး အာရှကတိကဝတ်၏ ခိုင်မာအားကောင်းသောသတင်းစကားအား ပေးပို့ရန် နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများအား ဖြေရှင်းရာတွင် အာရှ၏ အထောက်အကူပြုသော ဆောင်ရွက်မှုအား ပြုလုပ်ရန် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း ဝမ်ရိက အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။ ကမ္ဘာသည် အာရှ၏ အသံကို ပိုမိုနားထောင်သင့်ကာ ၎င်းတို့၏ သဘောထားရပ်တည်ချက်ကို လေးစားသင့်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ ရှုမြင်တွေးခေါ်မှုအပေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်သင့်သည်ဟု တရုတ်ဘက်က ယုံကြည်ကြောင်းလည်း ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဝမ်ရိက အာရှနိုင်ငံများသည် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို လျော့ပါးစေသည့် စစ်အေးခေတ်စိတ်နေသဘောထားအား ဆန့်ကျင်ကာ ပူးပေါင်းကာကွယ်သင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို မြှင့်တင်လျက် ရှိရာတွင် အပေါင်းလက္ခဏာပြပြီး အပြုသဘောဆောင်သည့်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ရန် ဒေသအပြင်ဘက်နိုင်ငံများအား ကြိုဆိုနေစဉ်အတွင်း ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်မှု သို့မဟုတ် စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို လျော့ပါးစေသည့် မည်သည့်လုပ်ရပ်မျိုးမဆို လက်မခံကြောင်း ဝမ်ရိက ပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယား ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆိုပြုချက် နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဆိုပြုချက်အား ထောက်ခံကြောင်း ၊ယင်းအဆိုပြုချက်နှစ်ရပ်သည် လက်ရှိအခြေအနေအရ အထူးအရေးပါသည်ကို ယုံကြည်ကြောင်း နှင့် ယင်းကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အတူ အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်လိုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာသည် အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးအား မှန်ကန်သည့် ချဉ်းကပ်နည်း လိုအပ်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Prak Sokhonn က အာဆီယံသည် စိန်ခေါ်မှုအမျိုးမျိုးအား မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်သွားမည် ဖြစ်ကာ ဆွေးနွေးမှုမိတ်ဖက်များနှင့်အတူ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော ဆက်ဆံရေးအား ထိန်းသိမ်းပြီး အာဆီယံ စည်းလုံးညီညွတ်မှု နှင့် ဗဟိုပြုမှုကို ထိန်းသိမ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ၊ တည်ငြိမ်ရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကာကွယ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, May 8 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi Sunday called on the world to listen more to Asian voices with global governance entering “Asian moment.”
Wang made the remarks when meeting with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn via video link.
From next month, China, Cambodia, Indonesia and Thailand will successively host the BRICS Leaders’ Meeting, the East Asian Leaders’ meetings on cooperation, the G20 Leaders’ Summit, and the APEC Economic Leaders’ Meeting, said Wang, adding that this is the “Asian moment” for global governance and the international community expects Asia to playaleading role in this regard.
Noting that today’s world is very complex and requires the right approach to various challenges, Sokhonn said ASEAN will properly respond to various challenges, maintain friendly and cooperative relations with dialogue partners, uphold ASEAN unity and centrality, and safeguard regional peace, stability and development. ■
Photo 1 – Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi meets with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn via video link, May 8, 2022. (Xinhua/Gao Jie)
Photo2– Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi meets with Cambodian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Prak Sokhonn via video link, May 8, 2022. (Xinhua/Gao Jie)